Isiphequluli se-Chrome: Owinile? Iziphequluli eziyi-10 ezinhle kakhulu zokuthenga ngo-2019 | Kusuka kuLinux
Isiphequluli se-Chrome: Owinile? Iziphequluli eziyi-10 ezinhle kakhulu zokuthenga ngo-2019
Sebenzisa a «Navegador web» ikakhulukazi, akuyona engcono kakhulu noma esetshenziswa kakhulu. Kepha ngokusobala i- «Navegador Chrome» de «Google» iphezulu ezindaweni zokuvota, okuhle kakhulu nokusetshenziswe kakhulu, kulandele i- «Navegador Firefox».
Kodwa-ke, kusukela okokuqala, kubizwa «Netscape Navigator» yavela ngonyaka we-1994 kuze kube namuhla, i «Navegadores web» bahambe ibanga elide, futhi abaningi banyamalala kuyo. Futhi noma ngabe unhloboni yedivayisi esetshenzisiwe, wonke amakhompyutha (ideskithophu, ilaptop noma iselula) okungenani afakwe eyodwa ngokuzenzakalela. Futhi zonke izindawo zokuvota zikhomba ezindaweni eziphezulu ezisetshenzelwe «Chrome, Firefox, Internet Explorer, Edge y Safari».
1 Iziphequluli eziyi-10 ezinhle kakhulu zokuthenga ngo-2019
1.1 Indawo yokuqala: Isiphequluli se-Chrome
1.1.1 Isiphequluli se-Chrome akuyona i-Chromium
1.1.2 Isiphequluli se-Chrome sicishe sibe kuyo yonke indawo
1.2 Indawo Yesibili: Isiphequluli seFirefox
1.3 Indawo Yesithathu: Iziphequluli ze-Internet Explorer ne-Edge
1.4 Abangu-7 abaphezulu abasele ku-Top 10
1.5 Kushiwo okukhethekile okungu-10
Iziphequluli eziyi-10 ezinhle kakhulu zokuthenga ngo-2019
Kuya nge kuxoxiswane nocwaningo izikhundla zingahluka kodwa ku-athikili yethu sizoqondiswa yilokho Netmarketshare, ngoba phakathi kwezinye izinto ucwaningo olunamandla, okungukuthi, isilinganiso esiku-inthanethi. Okwalabo abafuna ukubona ezinye izinhlolovo, bangaya kufayela le- StatCounter kanye nokuthi I-W3Counter.
Indawo yokuqala: Isiphequluli se-Chrome
Noma yikuphi lapho kuthintwa khona ucwaningo, bonke banikeza ifayela le- «Navegador Chrome» okokuqala, njengoba sishilo ngaphambili. Kusukela ngosuku lokudala lwalesi sihloko (11/11/2019) «NetMarketShare» ikunikeza «67,33%»e «StatCounter» uzuze i- «64,92%» futhi ku «W3Counter» kufinyelelwe «NetMarketShare» I-57,0%.
Isiphequluli se-Chrome akuyona i-Chromium
Kumele sikhumbule futhi sikhumbule ukuthi okuningi kwalokhu kunqoba kungenxa ye- «Navegador Chrome» yiyona «Navegador web» umthombo okhethekile futhi ovaliwe «Google». Futhi lokho okufanayo, akufanele kudidaniswe ne- «Navegador Chromium», Yini iphrojekthi yomthombo ovulekile de «Google».
Futhi, onjiniyela abavela eceleni bakhululekile ukuzama. Njengoba sikwazi ukubona ngezibonelo ze: «Brave, Opera, Vivaldi» futhi ngokunokwenzeka ukuphindaphinda okulandelayo kwe- «Navegador Edge» de «Microsoft».
Isiphequluli se-Chrome sicishe sibe kuyo yonke indawo
Ngaphezu kokucishe ube yonke indawo kuwo wonke amakhompyutha, i- «Navegador Chrome» ngokungangabazeki uchungechunge lwe izici ezinamandla, eyodwa ukuhlanganiswa okugcwele nge-akhawunti nezinsizakalo ze «Plataforma de Google», a i-ecosystem enkulu yezandiso kanye nesethi yezinhlelo ezethembekile. Izikhathi eziningi ezimenza abe oyisibonelo kokunye okusele kwe- «Navegadores Web» ekhona
Ekugcineni, phakathi kwezinye izinto eziningi, inohlelo lokusebenza olutholakala kokukhulu «Sistemas Operativos» ukuhamba («Android y iOS»), evumela noma yimuphi umsebenzisi wedeskithophu ukuthi agcine i- idatha evumelanisiwe ukufeza a ukuhamba okusobala, okusebenzayo nokusebenzayo phakathi kwamadivayisi akho amaningi.
Amabhukhimakhi, idatha egciniwe, nokuncamelayo nakho kuvunyelaniswa ngokushesha. Ngisho nokuvumelanisa nezandiso. Ngokufingqa, ukusebenza nokusebenza komthamo wokuhlanganisa we «Navegador Chrome» ingeyesibili kungelilodwa.
Indawo Yesibili: Isiphequluli seFirefox
Njengoba sonke sazi, i «Navegador Firefox» yiyona «Navegador Web» ngokuzenzakalela kusetshenziswe kakhulu kufayela le- «Sistemas Operativos Libre y Abiertos». Lokhu kungenxa yokuthi «Navegador Firefox» ithuthukiswa yi «Fundación Mozilla», nakho okungukuthi, a inhlangano engenzi inzuzo, okhiqiza izicelo zamahhala nezivuliwe, ngaphezu kokuthembeka, ikakhulukazi ezindabeni ze ubumfihlo, ukuphepha kanye nenkululeko nge-Intanethi.
Ngaphezu kwalokho, i «Navegador Firefox» futhi ine ukuthembeka okuphezulu, ukuzinza, isimanjemanje, ukuqamba kanye nokusetshenziswa okuphansi kwemithombo. Futhi muva nje, wethule eyakhe inombolo ye «versión 70» ngobubanzi obunezinhlobonhlobo zokusebenza nezinguquko, esivele sixoxe ngazo kuzindatshana ezi-2 ezedlule ezilandelayo:
IFirefox 70 ifika nemodi emnyama, izinguquko kubha yokuzula nokuningi
Indawo Yesithathu: Iziphequluli ze-Internet Explorer ne-Edge
Thanda noma cha «Microsoft» yiyona «Sistema Operativo» esetshenziswa emhlabeni, futhi ngenxa yalokho i- «Navegadores web» yiba ne- ingxenye ebalulekile yabasebenzisi abaqotho lokho kubenza babe endaweni yesithathu. Futhi noma ngabe kuliqiniso noma cha, inganekwane yasemadolobheni leyo «Soló se usan para bajar Chrome o Firefox» iqiniso ukuthi akhona, kanti amanye awasebenzisela unomphela noma ngezikhathi ezithile.
Abangu-7 abaphezulu abasele ku-Top 10
Kushiwo okukhethekile okungu-10
Ngamunye «binomio» yenziwe nge «tipo de usuario y tipo de ordenador» kukhona othize «Navegador web» evumelana kangcono kangcono kunezinye, kepha-ke, ukukhetha eyodwa ekahle kudlula Ukucatshangelwa kwezici njenge:
Ukuqalisa nokulayisha isivinini samakhasi ewebhu
Izinketho zokuphepha nobumfihlo zifakiwe
Ukusetshenziswa kwamandla okuphethwe
Izici ezahlukahlukene zifakiwe
Imvelo yama-plugins akhona nezandiso.
Vele, ngaphandle kokuphazamisa ifayili le- isipiliyoni esiwusizo nesingokoqobo yokuphequlula nsuku zonke.
Okokugcina, kuwebhusayithi ye Isabelo Semakethe Esiphelele ungaqinisekisa ngokuningiliziwe ukuthi i indlela yokuhlaziya isetshenziselwe ukwenza izibalo, uma kwenzeka noma ngubani efuna ukufuna okwengeziwe ngakho. Futhi uma uyithandile le ndatshana, ungayeki ukuphawula noma ukuwabelana ngakho nabanye eziteshini zakho zokuxhumana zenhlalo, amaqembu noma imiphakathi. Futhi qiniseka ukuthi ubukela ividiyo engezansi ehlobene nesihloko.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Isiphequluli se-Chrome: Owinile? Iziphequluli eziyi-10 ezinhle kakhulu zokuthenga ngo-2019
Inothi alibhalwanga kahle. Akuzona "ezihamba phambili" kepha kunalokho zithandwa kakhulu.
Ngaphandle kokungabaza, okusetshenziswe kakhulu… kepha hhayi okuhle kakhulu; kubukeka kuyinto elula kepha kumakhompyutha anezinzuzo ezinhle, uma kungenjalo, iyawa.
Okuhamba phambili futhi okuhle kakhulu yize konke kukumunye, futhi kuthembeke kakhulu kuMozilla, iSeaMonkey!
Bengihlale ngigcizelela ukuthi kufanele babe yisiphequluli esizenzakalelayo kukho konke ukusatshalaliswa kweLinux -SeaMonkey-, ngoba babeka iFirefox neThunderbird, SUSA TO SPE MUCH SPACE!
Ngiyavuma ngokuphelele, yize njengoba ngishilo ngaphambili, kuzinhlolovo okukhulunywe ngazo banayo njengeyona esetshenziswe kakhulu, futhi impela ihamba phambili ngokuya ngemisebenzi, izici nezinto ezintsha kwabaningi.
Ucwaningo lunalo njengolusetshenziswe kakhulu, futhi ngokuqinisekile lungcono kakhulu ngemisebenzi, izici nezinto ezintsha kwabaningi, kepha ukuze ulincome futhi ulisebenzise kufanele usebenzise ikhompyutha enhle futhi ukhumbuze abantu ngokubhuka abanakho maqondana okufanayo ngobumfihlo nokuphepha. Ikakhulu, angikaze ngiyisebenzise, ​​cishe njalo ngisebenzisa iFirefox, ngoba ilula futhi inhle kakhulu. Ngiyayithanda ne-Opera. Ngifundile nokuthi iWaterfox yinhle kakhulu.
Chema Gómez (@ejoagoz) kusho
Ngisasebenzisa iFirefox, okusabonakala kungcono kakhulu kimi. Lokho akusho ukuthi i-Chrome nayo inhle kakhulu. Ngakolunye uhlangothi, kufanele siqale ukuhlukanisa phakathi kwe-IE ne-Edge. Sekuyisikhathi eside zingafani, futhi manje njengoba isuselwa kuChromium ayihlangene ngalutho nayo. Kuhle kakhulu. Ngifuna ngempela ukubona ukuthi isebenza kanjani kwiLinux futhi, ikakhulukazi, kumakhompyutha "abuthakathaka".
Phendula u-Chema Gómez (@ejoagoz)
I-Facebook izocela abasebenzisi bayo ukuthi baqinisekise amaphrofayili abo ngevidiyo ye-selfie
Iklayenti leSteam leLinux manje selingaqalisa imidlalo yevidiyo esitsheni esikhethekile